समसामयिक देउसी - गजु Real - साप्ताहिक
एभन भन भाइ हो, के भन्ने ? शान्ति–सुरक्षा दे भन्ने । भन भन बैनी हो, के भन्ने ? बलत्कारी समाएर ले भन्ने । भन भन बा हो, के भन्ने ? बृद्धभत्ता बढाएर लेउ भन्ने । भन भन आमा हो, के भन्ने ? ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षा देऊ भन्ने ।
ए, हामी त्यसै आएनौं, जनताले पठाए, सरकार के–के गर्दैछ, चासो राख्न पठाए । महँगी घटाउँछु भन्या थ्यौ, समृद्धिका दिन गन्या थ्यौ । झन् बढ्यो भाउ तेलको, गफ मात्रै भयो रेलको ।
बेरोजगारी बढ्दैछ, उद्योगधन्दा लड्दैछ । युवालाई विदेश पठाउँदै, विकासको डम्फु ठटाउँदै । रेमिटेन्सले देश धानेर, समृद्धि बढेको ठानेर । गफैले बित्यो ६ महिना, सरकारलाई थाहा छ/छैन ?
ए राम्ररी भन, भन्दैछौं । स्वर मिलाईकन, कन्दैछौं । ऋणको भारी बोकेर, अनुदानको गफ ठोकेर । मन्त्रीको कुरा पत्याउँदै, नेताका भाषणले अत्याउँदै । होला कि होला कि भनेर, हुने दिन सधैं गनेर । ६ महिना बित्यो यत्तिकै, वर्षदिन बित्ला त्यत्तिकै ।
ए हिलो बाटो । ए लड्दै–पड्दै । ए खाल्टामा पर्दै । हिंड्दैछौं हामी । ए घुम्दैछौं तिमी । ए युरोप र जापान, ए गरेर चियापान । ए हेल्लो मेयर, बिग्रियो कि गियर । न बन्द हुन्छौ, न अघि बढ्छौ † ए कुच्चिएको भाँडो, ए जनतालाई घाँडो ।
पप्पुको पारा, टार्ने झारा । ए ठेक्का र पट्टा, ए ख्याल र ठट्टा । ए झ्याप पार्ने टेन्डर, जनतालाई हन्डर । ए कमिसनको जालो, ए सबको मुख कालो । ए ठेकदार र नेता, सबका मुख राता ।
ए, यो देश कसको ? नेताको । नेता कसको ? ठेकेदारको । ए ठेकेदार कसको ? गुन्डाको । ए गुन्डा कसको ? तस्करको । ए तस्कर कसको ? पुलिसको । ए पुलिस कसको ? राष्ट्रको । राष्ट्र कसको ? जनताको । ए जनताको कसको ? नेताको । ए को हो कसको ? कसको, कसको † ए राजनीतिको जालो, ए काम गर्छन् कालो । ए देशको झन्डा, बनाए पुछ्ने टालो ।
ए भन भन भाइ हो, भन्दैछु । ए तोडले भन, भन्दैछु । ए, हत्याका घटना गन्दैछु । ए बलात्कारका घटना, सुन्दैछु । ए तस्करीका काण्ड, भन्दैछु । ए सुनका डल्ला, गरेर सल्लाह । ए तस्कर र पुलिस, ए नगरी हल्ला । ए मिलेर खाने, ए, जेलचाहिं नजाने ।
ए, सुन सुन भाइ हो, सुन्दैछु । ए मन्त्रीका आश्वासन, गुन्दैछु । ए सिन्डिकेडको कुरो, ए पहिरोले पुर्‍यो । ए ठेकेदारको कुरो, कुरो न सुरो । गफमात्रै ठूला, गन्हाउने मूला ।
ए बोल–बोल भाइ हो, बोल्दैछु । ए गोप्य–गोप्य कुरा खोल्दैछु । ए पानीका किरो, ए कारबाही जिरो । ए चामलमा ढुंगा, ए कारबाही सुन्ना । ए करको भारी, ए जनतालाई पारी । ए भ्रमण र यात्रा, ए देखाउँदै जात्रा । ए काम छैन सिन्को, ए फुर्ती कत्रो तिनको ?
ए लेखको काने, ए औलको माने । ए यो वर्ष देउसी, ए यति नै जाने ।
राजेश पायल राईको देउसी गीत